Football Khabar » हल्यान्डका पिता र एजेन्ट अचानक बार्सिलोनामा : क्लबसँग पहिलो बैठकमा के–के भयो ?
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाले जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डका स्टार फरवार्ड अर्लिङ हल्यान्ड अनुबन्धका लागि पहिलो प्रयास देखिने गरी थालेको छ । उसले आज हल्यान्डका पिता र एजेन्टससँग बार्सिलानास्थित आफ्नै कार्यालयमा औपचारिक बैठक गरेको छ । स्पेनिस मिडियाले यो भेटघाट र बैठक सम्बन्धित भिडियो तथा तस्बिरहरू प्रकाशित गरेका छन् । हल्यान्डका एजेन्ट मिनो राईओला र उनका पिता अल्फ इन्ज एकसाथ आज बार्सिलोनामा देखा परेका थिए । खेलाडीको पक्ष र क्लबबीच आज घन्टौंसम्म बैठक चलेको हो ।
यी दुईजना एकसाथ बार्सिलोनाको कार्यालयमा पुगेको भिडियो सार्वजिनक भएका छन् । क्लबका अध्यक्ष जोन लापोर्टासँग यी दुवैले एकसाथ पहिलो औपचारिक छलफल आज गरेका हुन् । यो बैठकलाई हल्यान्डका लागि बार्सिलोनाले गरेको पहिलो सार्थक प्रयास मानिएको छ । करिब डेढ घन्टासम्म दुई पक्षबीच बैठक भएको बताइएको छ । बार्सिलोनाले आगामी समर विन्डोमा नर्वेका २० वर्षका गोल मेसिन खेलाडी भित्र्याउनका लागि खेलाडीका पिता र एजेन्टसँग पहिलो औपचारिक बैठक गरेको हो ।
‘मार्का’का अनुसार हल्यान्डका पिता र एजेन्टसँग बार्सिलोनाका अध्यक्ष र खेल निर्देशकले संयुक्त बैठक गरे पनि यो बैठकबाट खास डिल नभएको जनाइएको छ । दुवै पक्षबीच खेलाडी सरुवाका लागि सम्भावनाको मार्ग प्रशस्त गर्न सामान्य छलफल मात्रै भएको बुझिएको छ । अब एजेन्टले हल्यान्डको क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डसँग छलफल गर्नेछन् । ‘मार्का’ले भनेको छ– ‘बार्सिलोनाले हल्यान्डलाई साँच्चै चाहन्छ भन्ने कुरालाई यो पहिलो छलफलले पुष्टि गरेको छ । तर, यो छलफल एकदमै सामान्य रह्यो । खेलाडीका एजेन्टले बार्सिलोनाका अधिकारीसँग हल्यान्डले बार्सिलोनाका लागि खेल्न सक्ने कुरा खुला राख्दै अन्य क्लबहरूको प्रस्ताव पनि सुन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।’
खेलाडीका एजेन्ट राइओलाले बार्सिलोनासँग हल्यान्डका लागि क्लब डर्टमुन्डले १८० मिलियन युरो रकमको अडान राखेको कुरा जानकारी पनि गराएका छन् । तर, बार्सिलोनाका अधिकारीले हल्यान्डका लागि अधिकतम् १४० मिलियन युरोसम्म खर्च गर्न सक्ने कुरा बैठकका क्रममा जानकारी गरएको स्पेनका खेल पत्रकारहरूले उल्लेख गरेका छन् । ‘स्पोर्ट’ले लेखेको छ– ‘यो छलफलबाट कुनै ठोस सहमति वा सर्त बनेको छैन । यसले खेलाडी अनुबन्धका लागि सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । तर, बार्सिलोनाले डर्टमुन्डको चर्को सरुवा फी तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा एजेन्ट र उनका पितासँग दर्शाएको छ ।’
Haaland's dad and Mino Raiola in Barcelona. No, it's not an April fool. Yes, there'savideo: pic.twitter.com/n5cmRRJywi
— infosfcb (@infosfcb) April 1, 2021
प्रकाशित मिति १९ चैत्र २०७७, बिहीबार २०:३४